डिजाईन क्राउड: row 485,000,०००+ पेशेवरहरूबाट क्राउडसोर्स ग्राफिक डिजाइनहरू Martech Zone
डिजाईन क्राउड: row 485,000,०००+ पेशेवरहरूबाट क्राउडसोर्स ग्राफिक डिजाइन
सोमबार, अक्टोबर 26, 2015 आइतबार, अक्टोबर 25, 2015 Douglas Karr
हामी पूर्ण-समय डिजाइन टीमहरू मन पराउँछौं जुन हामी वेब साइटहरू, इन्फोग्राफिक्स र अन्य प्रकाशनहरूमा काम गरिरहेका छौं। तपाइँको तयारी मा एक डिजाइन टीम हुनु तपाइँको आउटपुट गुणवत्ता र स्थिरताको साथ मद्दत गर्दछ। त्योले भन्यो, त्यहाँ एक-अफ परियोजनाहरू छन् जुन सबैलाई एकैचोटि पप अप गर्दछ जब कि हामीलाई त्यहाँ बाहिर आउनु पर्छ र पूरा गर्नु पर्छ। हुनसक्छ यो व्यवसाय कार्ड हो, एक साइड परियोजनाको लागि लोगो, वा उत्पादन प्याकेजि। पनि। जब यो देखा पर्दछ, हामी भीडसोर्सिंग प्रणाली प्रयोगमा सफल भएका छौं।
DesignCrowd ती प्लेटफर्महरूमध्ये एक हो - 395,000 XNUMX,०००+ भन्दा बढि डिजाइन पेशेवरहरूको साथ, तपाईं केहि अविश्वसनीय परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाई सस्तोमा र चाँडो काम सक्नुहुनेछ।
[बक्स प्रकार = "सफलता" align = "aligncenter" वर्ग = "" चौड़ाई = "90%"] पाउनुहोस् Any any० कुनै पनि डिजाइन परियोजना बन्द + एक नि: शुल्क फिचर गरिएको परियोजना लिस्टि off ($ 35 मूल्य), केवल DesignCrowd.com मा! मात्र प्रविष्ट गर्नुहोस् कुपन कोड DC75OFF। १०/10१ मार्फत मान्य। [/ बक्स]
प्लेटफर्म सजिलैसँग काम गर्दछ:
एक संक्षिप्त पोस्ट गर्नुहोस् - तपाईंको प्रोजेक्ट वर्णन गर्नुहोस् र तपाईंको दृष्टि डिजाइनरहरूको लागि छोटो दिशानिर्देशमा अनुवाद गर्नुहोस्। निश्चित विस्तृत र केही उदाहरणहरू प्रदान गर्न निश्चित गर्नुहोस्। तपाईं खराब निर्देशनहरूको साथ धेरै डिजाइनरहरूको समय बर्बाद गर्न चाहनुहुन्न।
१००+ डिजाइन प्राप्त गर्नुहोस् - दुनिया भर बाट डिजाइनरहरु तपाइँको लागी डिजाईन सबमिट गर्दछ। तपाईं पनि इनबक्स सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
प्रतिक्रिया र संशोधनहरू - प्रतिक्रिया र मनपर्नेहरू प्राप्त गर्न तपाईंको नेटवर्कसँग तपाईंको डिजाईन साझा गर्नुहोस्। फेरि, सुधारको लागि सीधा धेरै प्रतिक्रिया र सन्देश कलाकारहरू प्रदान गर्नुहोस्।
सर्वश्रेष्ठ छनौट गर्नुहोस् - तपाईंको डिजाइन छनौट गर्नुहोस् र विजेता भुक्तान हुनेछ!
डिजाईन क्रोड एक अनलाइन बजार हो जुन लोगो, वेबसाइट, प्रिन्ट र ग्राफिक डिजाइन सेवाहरू प्रदान गर्दछ जुन विश्वव्यापी रूपमा स्वतन्त्र ग्राफिक डिजाइनर र डिजाइन स्टुडियोहरूमा पहुँच प्रदान गर्दछ। DesignCrowd ले क्राउडसोर्सि 2.0 २.० लाई एक सुन्दर, टिकाऊ, उच्च गुणस्तरको भीडसोर्सिंग प्रयोग गर्दछ जहाँ हरेक डिजाइनरलाई भुक्तान गर्न सकिन्छ र ग्राहकहरूले हाम्रो शीर्ष ग्राफिक डिजाइनरहरू ब्राउज गर्न सक्दछन् र उनीहरूको मनपर्दो हस्त-पिक छन।
DesignCrowd एक १००% पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी छ र तपाइँ तपाइँको डेडलाइन ओट,,,, वा १० दिन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पहिलो डिजाइन २ 100 घण्टा भित्र आउँनेछ। तपाईले छिटो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ र विस्तृत प्रतिक्रिया प्रदान गर्नुहुन्छ, दर्शन वास्तविकतामा आउने बित्तिकै डिजाइनरहरू छल्नेछन्। तपाईले बहुविध डिजाइनरहरूबाट 3० भन्दा बढी डिजाइनहरू प्राप्त गर्न अपेक्षा गर्न सक्दछ। यदि तपाईंलाई आफूले चाहेको कुरा फेला परेन भने, तपाईं परियोजनाको days० दिन भित्र रिफन्ड अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रकटीकरण: हामी यस लेखमा हाम्रो सम्बद्ध लिंक समावेश गर्दैछौं।
टैग: भीडसोर्स डिजाइनक्राउडसोर्सिङडिजाइन भीडपैसा बचाउनुहोस्
तपाईंले इन्फोग्राफिक्समा किन लगानी गर्नु पर्छ
मार्केटिंगका लागि लिंक्डइन प्रयोग कसरी गर्ने